Mayelana NATHI - Beihai Composite Materials Co., Ltd.
I-BEIHAI AFP dept.is inkampani yokwenza izinto ezihlanganisayo zensimbi enamagwebu nokucwaninga nokuthuthuka, ukukhiqiza, ukuqhutshwa komkhiqizo ohambisanayo, ubunjiniyela bokusebenza komkhiqizo kanye nensizakalo ehlobene nayo yezobuchwepheshe ibe munye.Umkhiqizo omkhulu we-BEIHAI AFP yi-Aluminium Foam Panel, futhi manje inkampani iphethe amalungelo obunikazi obunikazi bokukhiqiza ekukhiqizeni, ekwenziweni nasekusebenziseni i-foam aluminium.
1. Amafemu ama-3 anezisebenzi ezingama-2100 ezikhethekile ekukhiqizeni imikhiqizo ye-Aluminium.
2.Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-26 esinezigaba zomkhiqizo ezingaphezu kuka-18 ezinganikeza ngezinsizakalo zokuma okukodwa.
3. Yonke imikhiqizo yethu enamazinga ekhwalithi aphesheya, imikhiqizo ithunyelwa eSoutheast Asia, Mid East, Eastern Europe, South America, North America kanye nezinye izimakethe ezinkulu zaphesheya kwezilwandle.
Ithimba le-R & D nezobuchwepheshe obuphambili ukuze unikeze ngempumelelo zonke izinhlobo zemikhiqizo ejwayelekile nemikhiqizo eyenziwe ngezifiso.
5. Sineminyango ekhethekile esezingeni ukuqinisekisa ukuthi ayikho inkinga esezingeni ngaphambi kokulethwa kwayo.
6. Ukuthunyelwa kwempahla cishe sekuyiminyaka eyishumi yomlando, kunqwabelene nokuhlangenwe nakho okucebile futhi kujwayelene nesitifiketi sedokhumentari kanye nenqubo yokuthumela okukunikeza izinsizakalo zokuthekelisa eziqeqeshiwe.
7. Ngokuya ngokufunwa kwamakhasimende ngezindlela zokukhokha eziguqukayo nezinhlobonhlobo. Njenge-L / C, T / T, inyunyana yaseNtshonalanga, i-paypal, njll.
8. Ukuthengwa kwangaphambi kokuthengisa kwe-inthanethi kanye nesevisi yokuthengisa ngemuva kokukunikeza impendulo efanele futhi efike ngesikhathi.
Le nkampani isebenzisa amasistimu wokuklama osezingeni eliphakeme kanye nokusetshenziswa kokuphathwa kohlelo lwe-ISO9001 2000 lomhlaba wonke olusezingeni eliphakeme.